प्रजिअ खरेलबाट राहत रकम थापी रहँदा मानबहादुर शाहीको आँखाबाट आँशुको बलेनीधारा झरी रह्यो …! – ebaglung.com
२०७५ श्रावण ३०, बुधबार २१:३५	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
योगेन्द्र विश्वकर्मा, बुर्तिवाङ २०७५ साउन ३० । श्रीमती, बुहारी र नातीलाई हसीखुसी अवस्थामा घरमा छोडेर बस्तुभाउको हेरचाह गर्न गोठ गएका निसीखोला-३ धुर्सौलाका मानबहादुर शाहीको अहिले घर भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । ६५ वर्षिया श्रीमती दिलकुमारी शाही र ३५ वर्षिया बुहारी डल्ली शाहीको पहिरोले घर भत्काउदा पुरिएर मृत्युको मुखमा पुगे । सासू बुहारीको विभत्स शवलाई सम्झेर पुँपुरोमा हात राखेर बिलौना गरिरहेका छन् मान बहादुर । दैव संयोग भनौ ३ वर्षको उनको नाती बिनोद शाहीको भने ज्यान बचेको छ । नातीलाई काखमा राखेर श्रीमती र बुहारीलाई सम्झंदै बरल बरल रोईरहेका छन् मानबहादुर ।
उमेरले ६५ काटेका मानबहादुर, यो बुढ्यौली उमेरमा न श्रीमती न बुहारी, दुबै छोराहरु रोजगारीको लागि भारतमा गएको अवस्था निरीह बनेर कर्मलाई धिक्कारी रहेका छन् । निष्ठुरी दैवले पनि कस्तो आपत विपदमा पा-यो, मानबहादुरलाई, भन्दैछन छरछिमेकी आफन्तहरु । घरबासपनि गुम्यो, श्रीमती र बुहारीलाई पनि दैवले चुँडेर लग्यो, के दुर्दशा देख्नु प-यो नि …! भन्दै आफन्तहरु पीडामा छन् । शाहीको त्यो कारुणिक एवं मार्मिक अवस्था देख्दा कस्ले मन थाम्न सक्ला र ? भनिरहेका छन छरछिमेकी ईष्टमित्रहरु ।
यस विपदमा उद्धार गर्न गएको टोली घटनास्थल पुग्नु अगावै सम्पर्कविहीन दुबै सासू बुहारीको शव भेट्टिएको दु:खद खबर सुन्दा टोलीको हृदयपनि छियाछिया नहुने कुरै भएन ।
बिपद व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेलले, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मी, अर्जुन वाण गणका गणपति भुवनराज देवकोटा, जिल्ला वन अधिकृत विशाल घिमिरे, गाउपालिका अध्यक्ष लगायत स्थानीय जनप्रतिनिधीहरुको समुपस्थितिमा मृतकका श्रीमान एवं ससुरा मानबहादुर शाहीलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट रु २ लाख २० हजार राहत रकम प्रदान गरिरहँदा पनि शाहीका आँखाबाट आँशुको बलेनीधारा बगिरहेको थियो । उपस्थितजनको अनुहार मलिन थियो, दृश्य मार्मिक थियो ।
सोही अवसरमा निसीखोला गाउपालिकाका अध्यक्ष तारानाथ पौडेलले मृतक दुईजनालाई रु ३०।३० हजार, घर व्यवस्थापनका लागि रु १० हजार थप रु ५ हजार गरी जम्मा रु ७५ हजार गाउपालिकाले दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
कार्यक्रम प्रजिअ खरेलको प्रमुख आतिथ्यता, अध्यक्ष पौडेलको अध्यक्षता एवं नायब सुव्वा नन्दराम भुसालको सन्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
मृतक सासू बुहारीको शवलाई झिवाखोला स्थास्थ्य चौकीमा पोष्टमार्टम गरि मृतकका परिवारलाई शव बुझाई सकिएको स्थानीयले जानकारी दिए । बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रबाट चिकित्सक घटनास्थलमा लगेर शवको पोष्टमार्टम गरिएको हो । मृतकहरुको आजै दाहसंस्कार गरिएको छ ।
घटनाको समाचार जानकारीमा आउँदा साथ प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेल र जिल्ला प्रहरी प्रमुख रेग्मी सहितको उद्धार टोली घटनास्थल प्रस्थान गरेको थियो । सेना र प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा पहिरोले अवरुद्ध मध्यपहाडी लोकमार्गको अवरोध हटाउदै टोली घटनास्थल पुगेको थियो र केहि समय अघि पीडितलाई रकम हस्तान्तरण गरी टोली बुर्तिवाङ फर्किएको छ ।